KUHLOMULE INTSHA KWEZOBUCHWEPHESHE – Sivubela intuthuko Newspaper
By Makhosi Mngoma	 On Mar 19, 2020 102
Intsha ebiyingxenye yombukiso wezobuchwepheshe eveze umpompi ovulwa ngonyawo.
Kuvulwe ngokusemthethweni isikhungo esizosiza abantu abasha kwezobuchwepheshe besimanje eMkhumbane eCato Manor.
Lokhu kuvulwa kwalesi sikhungo kuthathe izinsuku ezimbili okuyilapho kuvuleleke khona abantu abasha ukuba baveze konke abanakho okuwubuchwepheshe obungenza impilo ibe lula kubantu. UMnu Mfana Qwabe usidalule njengezinye zezikhungo ezizosabalalisa i4th Industrial Revolution. “Intsha izothola ukuveza amakhono enawo iphinde izakhele amathuba amaningi,” kuchaza uQwabe ongaphansi koPhiko LwezokuThuthikiswa koMnotho kuMasipala WeTheku.
Abebeyingxenye yalo mcimbi wosomabhizinisi obubanjelwe e-Umkhumbane Entrepreneurial Support Centre uMnuz Ntando Ndimande no Ayanda Bhengu benkampani iSky High Innovations babukise ngompompi ovulwa ngonyawo uphinde uvalwe ngalo.
UNdimande uthe uma benza lo mpompi bebengazi ukuthi kuzofika into efana neCoronavirus kodwa bayabona ukuthi lo mpompi usungasiza nasekunciphiseni leli gciwane.
“Ngalo mpompi awudingi ukusebenzisa izandla ukuwuvula nokuwuvala, kuphela nje usebenzisa unyawo lwakho ebese amanzi eyaziphumela,” kubeka uNdimande.
Leli cebo labo likhombise ukuthokozelwa abaningi njengoba kunaleli gciwane okungenzeka ukuthi uziwashe izandla kodwa uthi uma usuvala umpompi uphinde uthinte amagciwane esivalweni sompompi.
Umbukiso wabo ukwazile ukubahlomulisa ngesamba semali engu-R500 000 obuphuma kuMasipala weLembe ozobasiza ukuqhuba ibhizinisi ezimakethe nokunye.
UNdimande ongumsunguli weSky High Innovations uphinde washo nokuthi lo mpompi uzoqinisekisa ukongiwa kwamanzi ngoba kuyenzeka umuntu ashiye umpompi ungavalisisiwe kanti ngalolu hlobo lo mpompi, uma ususa unyawo uyazivalekela kungaphumi neconsi lamanzi.